Foomka Tooska ah ee Shaaha Fiican & Soosaaraha Mashiinka Boorsada ee ugu Fiican | GAOGE
Foom Toosan Shaah Buuxi & Khatimidii Mashiinka Bacging
GAOGEPAK ee Shaaha Vertical Form Fill & Seal Bagging Machine waxaa loogu talagalay miisaamida iyo xirxirida alaabooyin badan oo kala duwan oo ay ku jiraan laakiin aan ku ekeyn digirta, bariiska, digaaga, cuntada fudud, macaan, wax soo saarka cusub, dhir udgoon, kafee, cuntada xayawaanka, barafaysan cuntooyinka, kiimikooyinka, qalabka guryaha iyo waxyaabo kale oo badan.
GAOGEPAK waxay soosaaraysaa noocyo kaladuwan oo qaab toosan ah, buuxinta & shaabadaysan (VFS ama VFFS) mashiinada boorsooyinka ee dhamaan warshadaha iyo alaabada ay kamid yihiin cuntada fudud, kafee, farmaajo, cuntooyinka barafaysan, nacnac, shukulaatada, macaan, cuntada badda, budada, digaaga, hilibka iyo inbadan .
GAOGEPAK Nidaamyada Miisaanka & Tirinta Tooska ah - MIISAANKA FILLER
ISKU FUDUD OO SI FUDUD LOO ISTICMAALO
Mashiinka buuxiya miisaanka otomaatiga ah waxaa loogu talagalay inuu si sax ah u bixiyo una buuxiyo alaabooyin badan oo kala duwan boorsooyinka, kartoonada, baakadaha, sanduuqyada, dhalooyinka iyo weelasha.
Miisaanka 'Linear' wuxuu si sax ah u miisaami doonaa, bixin doonaa iyo xirmada lowska, cuntooyinka fudud, nacnaca, qalabka, qalabka barafaysan, khudaarta, miraha, hilibka, digaaga, maaddooyinka, dhir udgoon, kafee, budada, granules, cuntada xayawaanka iyo waxyaabo kale oo badan.
Loogu talagalay in loo isticmaalo muddo dheer iyo isku halaynta miisaanka 'Linear' waxaa ka mid ah qaab bir bir ah, qalab aan yareyn oo qallooca oo aan u baahnayn wax isbeddel ah marka la adeegsanayo codsiyo badan; qaybaha xiriirka ee aan laga saari karin qalab, iyo qaybaha jaangooyada ah ee yareeya kharashka dayactirka.
1. Awood u leh samaynta noocyada kala duwan ee boorsada, sida bacda barkinta, boorsada gusset, quad seal qupp up bag, iwm.
2. Way fududahay in la beddelo bacda hore ee daqiiqadda cabbirka baaxadda leh iyada oo aan loo baahnayn nidaam adag.
3. Nidaamka xakamaynta Panasonic PLC, shaashadda taabashada aadanaha-mashiinka.
4. Mashiinnada adeegga labalaabka ah, mashiinkani wuxuu awood u leeyahay inuu si sax ah u gaaro
meelaynta, xawaare dhakhso leh oo habsami leh, si habsami leh iyo xasiloonida u socota.
5. Shaqada ilaalinta alaarmiga, si loo yareeyo khasaaraha.
6. Nidaamka otomaatiga ah ee cabbirka, quudinta, buuxinta, samaynta bacda, daabacaadda.
7. Birta ka sameysan birta aan lahayn ee 304, mid aamin ah oo waarta.
8. Way fududahay in la shaqeeyo oo la dayactiro, kaliya waxaa loo baahan yahay hal shaqaale.
9. Xawaaraha sare ee wax lagu duubo, illaa 80 kiish daqiiqaddii.
10. Iyada oo leh 4 ilaaliyeyaasha heerkulka.Qol kasta oo kuleyliyaha ah waxaa lagu xakameeyaa shaqsiyan
xakamaynta heerkulka si loo kiciyo xasilloonida heerkulka sare
Hore: Mashiinnada Baakadaha Iswada ee Bariiska, Baastada, iyo Mashiinka Waxsoosaarka Beerka
Xiga: Bariiska Guud ee Foomka Tooska ah Buuxi & Khatimidii Mashiinka Boorsada
Mashiinka Xirmooyinka Sonkorta otomaatiga ah
MAGAALADA, BEERAHA & MAKIINADDA MAGAALADA XIRIIRKA
Si buuxda otomaatig ah Boorsooyin horay loo sameeyay oo Cuntada Doypa ...
Premade Pouch Rotary Buuxi iyo Khatimidii Dhalo Gra ...
Granul, Midho, Miraha qalalan VFFS Foomka Tooska ah Fil ...
Premade Pouch Rotary Fill iyo Khatimidii Basasha Xidhmada ...